"म धर्म होइन धार्मिक्ता सिकाउछु"
समय गतिशील छ र उस्को गतिशीलताको मुख्य कारण आखिर मान्छे नै हो, थियो र रहने छ। तर यति हुँदाहुदै पनि सबै मान्छेहरू गतिसङ्गै हिंड्दैनन र धेरै चाहिँ आफ्नो अहङ्कार सुहाउँदो पक्षलाई मात्र स्वीकारेर त्यसैलाई समग्र जीवन ठान्ने गर्छन् । यही भीडमा फेरि अत्यन्तै थोरै मान्छेहरू यस्ता पनि पैदा हुन्छन् जो समय र मान्छे दुवैलाई मिसाएर एउटा बिल्कुलै सन्तुलित रङको निर्माण गर्दछन्। ओशोको रङ यस्तै एउटा रङको रूपमा आज पनि धेरैको छनोटमा परेको देखिन्छ, सन्सारैभरि फैलिएको देखिन्छ अनि अनेक रूपहरूमा धेरैलाई यस्ले आकर्षित गरेको देखिन्छ।
हुन त म आफैं ओशो सन्यासी तर म यहाँ समीक्षात्मक दृष्टिले ओशो दर्शनको बारेमा केही भन्न उदेलित भएर उपस्थित छु। लाखौं किताबहरू पढेर, स्वयम् साधनाको उचाइमा पुगेर, हजारौं अडियो भिडियो र सयौं किताब एवम् ध्यान बिधिहरूको माध्यमबाट आफ्ना कुराहरू भनेर र अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशमा आफ्नो कम्युन निर्माण गरेर सारा विश्वमा एउटा छुट्टै तरङ्ग उत्पन्न गर्नु हुने ओशोको खास दर्शन चाहिँ के हो त? यो प्रश्न ओशोसङ्ग जोड्ने माध्यम बन्यो मेरो निम्ति र म अरूका भनाइहरूबाट उठेर आफै ओशोलाई सुन्न थाले। सुन्दासुन्दै त्यो मेरो निम्ति एउटा नशा बन्यो र त्यही नशाका झन्झन् गहिरा अनुभूतिहरूमा आज पनि म डुबिरहेकी छु।
ओशो दर्शनको बारेमा धेरैका धेरैथरी धारणा र विश्लेषणहरू सुनेकी छु। केही ओशोलाई धनसङ्ग जोड्छन् त केही यौनसङ्ग, केही ओशोलाई नै सिधै गुरु मान्न सकिन्छ भन्छन् त केही ओशोसङ्ग जोडि दिने कुनै अर्को गुरु चाहिन्छ भन्छन्। केही ओशोलाई नया धर्म हो भन्छन् त केही सबै धर्मको सार हो भन्छन्, केही ओशोले घर छोड, विवाह नगर भन्नु भएको छ र भन्दै विवाद गर्छन् त केही ओशोलाई ध्यान र मौनको पर्याय मान्छन्। यी र यस्ता अनेक कुराहरूको आधार सबैको आआफ्नै होला तर ओशोका भनाइहरूले कुनै पनि कुरालाई आदर्शको रूपमा स्थापित गरेको पाइन्न। ती त मीठा गीतझैँ लागछन्, जस्का शब्द र सङ्गीतहरूमा एउटा अनुभवी गायकले आफ्नो सुमधुर स्वरमार्फत प्रण भरेको छ।
ओशोले कतै भन्नुभएको छ, "सद्गुरूले शरीर छोडेपछि शिष्यहरू गुरूका आफूले समाएका कुराहरूमै अडिनछन् र बिभाजित हुन्छन् तर गुरु समग्रता हो।" उहाँका पनि हजारौं सन्यासी थिए। सबैको समस्या एउटै थिएन न त अवस्था नै। फेरि ओशो सधैं उहाँका नवसन्यासीहरूको माझमा मात्र पनि रहन सक्नु भएन किनभने उहाँका सुरूवाति समयहरूमा उहाँ आफूलाई बुझ्ने मान्छेहरूको समूह निर्माणमा जताततै बोल्दै अनि निश्चित स्थान र समयमा ध्यान शिविरहरू संचालन गर्दै अघि बढ्नु भयो। पछि जब उहाँले नवसन्यास दीक्षा दिन थाल्नु भयो तब झनै पूरै विश्व र सन्चार तथा पत्रकारिताको जगतले उहाँलाई खोज्न थाल्यो। ओशोको एउटा प्रवचनमा हामी जे कुरा बुझेझै गर्छौं कुनै अर्को प्रवचनमा उहाँले त्यही कुरालाई काटि दिनु हुन्छ र एउटा अतिबाट अर्को अतिमा चल्ने मान्छेको स्वभावप्रति हामीलाई बारम्बार सचेत गराउनु हुन्छ। मान्यता र अनुभवबाट समेत पाक्नु पर्ने बताएर पलपलमा जिउने इशारा गर्नु हुन्छ। एउटा यस्तो विविधता जस्मा मात्र मान्छेको जागरूकता सामेल होस्।
यसरी हेर्दा ओशोको दर्शन निराकारमा फैलिएको दर्शन हो भन्न सकिन्छ। "म धर्म होइन धार्मिक्ता सिकाउछु", "संन्सारमा जति मान्छे छन् त्यति ओटै धर्म हुनु पर्छ", "म कुनै चीजको बिरोध गर्दिन तर म धेरै चीजहरूको लागि हुँ", "केहीको लागि र केहीबाट होइन मात्र स्वतन्त्र बन", ओशोका यस्ता थुप्रै भनाइहरूले आकारका दर्शनहरूमा पटकपटक प्रहार गरेको पाइन्छ। र अन्त्यमा सबै दर्शनहरू छोडेर ओशो भन्नु हुन्छ, "समस्या अनेक समाधान एक, ध्यान", फेरि पनि ओशोको ध्यानको कुरा एकाग्रतालाई भत्काएर समग्रतातर्फ बढेको पाइन्छ।
बुधबार, जेठ १४, २०७७ सारङ्गी न्यूज
अझै घटनालाई तोडमोड गरिनुको रहस्य के होला ? के लकडाउन उल्लङघन गरे भनेर यसैको निहुँमा बाँकी बाँचेकालाई कानून लगाउने हो ? राज्य कसका लागि? पुरा पढ्नुहोस्